धरहरा ठडियो, पीडितका घर कहिले ? | eAdarsha.com
धरहरा ठडियो, पीडितका घर कहिले ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौंमा पुनर्निर्माण गरिएको धरहराको भव्य सभारोहबीच उद्घाटन गरेपश्चात त्यसले गरे के हुँदैन भन्ने भावनाको विकास गरेको छ । २०७२ सालको महाभूकम्पले भत्काएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ साल फागुन ४ गते नयाँ धरहरा निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासको बेला उनले मेरो धरहरा मै बनाउँछु भन्ने अभियान नै चलाएका थिए । उनको त्यो अभियान पूरा त भएन तर धरहरा निर्माण भएकोमा भने नेपालीहरु खुसी भएका छन् । २०७२ सालको महाभूकम्पले ११ तले धरहरा भत्काएको थियो भने २२ तले धरहराको पुनर्निर्माण भएको छ । यत्ति छिट्टै धरहरा बन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिएनन् । धरहराको काम त पूरा भएको छैन तर त्यो उद्घाटनयोग्य भने भएको छ ।
धरहराको निर्माणले मेरो धरहरा मेरो गौरव भन्ने भावनाको विकास गरेको छ । यसको निर्माणबाट अरु सम्पदाहरुको निर्माण कार्यमा गति थपिने अनुमान गरिएको छ । यसको निर्माण कार्यमा लागेका व्यक्ति, कम्पनीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले तिनीहरुको कार्यको प्रशंसा गरेर प्रशंसापत्र प्रदान गरेका छन् । उनले धरहराको धेरै वर्णन गर्दै यो कहिल्यै नभत्किने गरी बनाइएकोसमेत भनेका छन् । उनले आफ्नो उद्घाटन भाषणमा पुरानो धरहरा भत्केर ज्यान गुमाएका परिवारको १ जनालाई धरहरामा रोजगारी दिने पनि घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले २०७२ सालको महाभूकम्पले भत्काएको भौतिक संरचनाहरु ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । निर्धारत अवधिमा त काम पूरा भएन । तर अहिले धेरै सम्पादकहरुको भौतिक संरचना पूरा हुने क्रममा छन् । केही हप्ता पहिले मात्रै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रानीपोखरीको उद्घाटन गरेकी थिइन् भने अब केही हप्तामा काठमाडौंको ऐतिहासिक गरिमाको रुपमा रहेको काष्ठमण्डपको काम पनि पूरा हुँदै छ । धेरै सम्पदाहरुको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उद्घाटनका लागि सधैं तत्पर रहने प्रधानमन्त्री ओलीको लािग यो अनुकूलको वातावरण भएको छ । बडो तामझामका साथ धरहरा उद्घाटन भइरहँदा र सम्पदा निर्माण भइरहँदा सर्वसाधारणका घर टहरा भने अझै ठडिन सकेका छैनन् । यसले सरकारको प्राथमिकता प्रष्ट पारेको छ । क्षति भएका घरधनी कतिपय लाभग्राहीको सूचीमा पर्न सकेका छैनन् । तथ्यांक संकलनमै त्रुटि रहेको गुनासो पनि नआएको होइन । दलीय आस्थाका आधारमा नाम राख्ने र काट्ने काम भएको छ । धरहरासँगै भूकम्प पीडितहरुको मन पनि ठडिनु जरुरी छ ।